थापाथली अस्पताल आउने काेही फर्किनुपर्दैन : डा. संगीता मिश्रा – Health Post Nepal
थापाथली अस्पताल आउने काेही फर्किनुपर्दैन : डा. संगीता मिश्रा
२०७७ असार ८ गते १९:०७
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) आफैंमा असामान्य अवस्थामा रहेको छ। माघदेखि नै हामीले यो भाइरससँग लडिरहेका छौं। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको संख्या घटेको तथा मातृमृत्युदर बढेको आएको छ। हाम्रो देशमा २०१६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने संस्थागत प्रसूति कम नै रहेको थियो। ५८ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति सेवा लिने गरेका थिए।
अहिले विभिन्न कारण जस्तैः लकडाउन, यातायतको असुविधा, एम्बुलेन्स समयमा नपाए वा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि अन्योलता भएकाले संस्थागत रूपमा प्रसूति गराउने संख्या घटेको देखिन्छ। तर, यो विगतका दिनदेखि यसलाई सहजता बढाउने प्रयास पनि गरेका छौं।
गभर्वती महिलाले एन्टीनेटल चेकअप गर्नैपर्छ। हामी घरमै बसे पनि ठीक भन्ने सोचमा हुन्छौं। जुन गलत हो। गर्भावस्थामा कम्तीमा पनि चार पटक एन्टीनेटल चेकअप गर्नुपर्छ। ३, ६, ८ र ९ महिनामा गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रोटिनयुक्त खाना, झोलिलो पदार्थ गर्भवती महिलाले सेवन गनुपर्दछ। साथै, चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम आइरन, क्याल्सियम, दूधहरूको सेवन गर्दा गर्भवतीको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ।
९ महिनाभित्र कुनै पनि बेला यदि रक्तस्राब भएमा, पेट दुखेमा, बच्चा कम चलेको वा नचलेमा, यौनीबाट पानी बगेमा, नियमित चेकजाँचमा ब्लड पे्रसर उच्च देखिएमा र आँखा धमिलो देखिने जस्ता समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ।
त्यसैगरी, गर्भवतीले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। घरमा हुनुहुन्छ भने साबुनपानीले हात धुने हो। यदि हात धुन सम्भव भएन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने हो। माक्सको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गनुपर्छ। किनभने भारत तथा अन्य देशबाट धेरैजना मानिस फर्किरहनुभएको छ। स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन रहेका छन् । घरबाहिर निस्कँदा माक्सको प्रयोग र सामाजिक दूरीको पालना गनुपर्ने देखिन्छ।
महिलाहरू कोरोनासँग डराएर चेकअप गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जानुभइरहेको छैन। तर, कोरोनासँग डराउने नै होइन, बरु सतर्कता कसरी अपनाउने त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
कुन–कुन समस्या देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल जाने त?
यसबाहेक १०० डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आए, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएमा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्छ। सुत्केरी भने स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ। घरमा सुत्केरी गराउँदा कतिपय समस्या उत्पन्न हुन्छ। सुत्केरी हुनेबित्तिकै आमाको त्यति राम्रो स्याहारमा ध्यान दिँदैनौं। तर, सुत्केरी भएपछि धेरै समस्या आउन सक्छ। प्रसूति भएपछि पहिलो, तेस्रो, साताैँ र २८ औं दिनमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीसँग टेलिफोनमार्फत सल्लाह दिँदा पनि धेरै समस्या हल हुन्छ।
प्रसूति भएपछि स्तनपान गराउने कि नगराउने अलमल रहेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण भएकी महिलाबाट स्तनपानमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन। स्तनपान गराउँदा बच्चामा कोरोना सर्दैन भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।
त्यसकारण कोरोना भएकी महिलाले पनि आफ्नो बच्चालाई स्तनपान आरामले गराउन सक्नुहुन्छ। संक्रमण नभएकी महिलाले बच्चालाई छातीमा टाँसेर स्तनपान गराउनुपर्ने हुन्छ।
महिलालाई समस्या भए फोनमा सल्लाह लिन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक अस्पताल नियमित सेवा पहिला जस्तै, ओपिडी, नियमित अप्रेशन सेवा र परिवार नियोजनका सेवा चलिरहेका छन्। त्यसैगरी पाठेघरको अप्रेशनको सेवा सुचारु गर्न लागेका छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गर्भवती महिला अस्पताल आउँदा कुनै हालतमा सेवाबाट वन्चित हुनुपर्दैन।
प्रसूति अस्पतालले कसरी सेवा दिँदैछ?
कुनै पनि महिला सेवा लिन आउँदा अस्पतालको क्षेत्राधिकार तोकेका छौं। यदि उहाँ ननकोभिड हुनुहुन्छ भने नियमित सेवा लिन जानुहुन्छ । यदि कोरोनाको शंका छ वा संक्रमित हुनुहुन्छ भने छुट्टै ठाउँमा सेवा दिइरहेका छौं। अस्पतालको वेबसाइटमा हेल्पलाइन रहेको छ।
लकडाउनका बेलामा एम्बुलेन्सलाई कहीं पनि रोकिएको छैन। त्यही भएर सुत्केरी महिलाले कुनै पनि एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा हुन्छ। काठमाडौंको हकमा १०२ नम्बरमा डायल गरेर एम्बुलेन्सको सेवा लिन सक्नुहुनेछ। उपत्यका बाहिर १०० नम्बरमार्फत सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक एम्बुलेन्स भएन भने पनि सुत्केरीलाई कुनै पनि सवारी साधनमा ल्याउँदा सरकारले रोकेको छैन।
(परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा.मिश्राले साेमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिएकाे जानकारीका आधारमा याे सामग्री तयार गरिएकाे हाे )